हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- ३३ वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेँ, छाडेर कहाँ जानु? (भिडिओ) :: मनोज सत्याल :: Setopati
हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्- ३३ वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेँ, छाडेर कहाँ जानु? (भिडिओ)
'अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई अरु भूमिका दिने कुरा गर्नुभएको छ'
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक फेर्ने तयारी गरिरहेको छ। हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको छ।
त्यसका लागि शाक्यलाई 'मार्गप्रशस्त गरिदिन' मन्त्री भुसालले आग्रह गरेकी छन्।
शाक्यले पनि आफूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा प्राधिकरण छाड्ने संकेत गरेका छन्। तर राजीनामा दिएर अथवा सरकारले जबरजस्ती हटाए त्यसविरूद्ध प्रतिवाद गर्ने शाक्यको तयारी छ।
सेतोपाटीले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरण छाड्न तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ।
उनका भनाइका मुख्य मुख्य बुँदाहरूः
मैले काम गर्दा कोभिड ठूलो व्यवधानका रूपमा देखापर्‍यो। ठेक्कापट्टा ढिलाइ भयो। निषेधाज्ञाले म्याद थप्नुपर्‍यो। आयोजनाहरूले म्याद थप गरे। सरकारले पनि म्याद थपिदियो। आफूले भनेजस्तो गर्न पाइएन।
विद्युत प्राधिकरणमा ६ महिना कार्यकारी निर्देशकसहित नौ महिना नेतृत्व गर्दा ६ जना मन्त्रीलाई स्वागत गरेँ। त्यसले पनि काम गर्न समस्या भयो। 'एडजस्टमेन्ट'मा मिहेनत लगाउनु पर्दो रहेछ। नयाँ मन्त्री आउँदा नयाँ गर्छु भन्ने हुँदो रहेछ। मलाई पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा नयाँ आउँदा त्यस्तै भयो। भनिन्छ नि, नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ।
बत्ती झ्याप झ्याप जान्छ भन्नु मिडिया र आम मनोविज्ञान हो। अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक त्यो क्रम घटेको छ। हामीले प्रणालीमा लगानी बढाएका छौं। यो घट्दै जान्छ। अघिल्लो वर्ष प्रणालीमा समस्या ४० पटक आएकोमा यसपटक ३४ पटक भयो। यसमा म जस लिन्छु। प्रणाली 'लुप'मा राख्ने बनायौँ। खिम्ती ढल्केबर बनेको ४ वर्ष हुँदा समेत एउटा लुपमा राख्ने भएको रहेनछ। खिम्तीबाट ऊर्जा आपूर्ति एउटैमा राख्ने काम गरेँ। विद्युतको माग २५ हजारबाट ३२ हजार मेगावाट पुगेको छ।
अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई अरु भूमिका दिने कुरा गर्नुभएको छ। राम्रो भूमिका छ भने म टिमबाट हटेर बस्न तयार छु। अरु के हुनसक्छ भनेर सोधपुछ भइरहेको छ। तर त्यो जरुरी छैन। म एउटै टिममा बसेर काम गर्न इच्छुक छु भनेको छु।
नाफा सरकारको निर्णयले कम भयो। महसुल घटाउने निर्णय भयो। महसुलदर घटाउन नियमन आयोगले निर्णय गरेको हो।
जबजस्ती हटाइयो भने अन्याय भएको अनुभूति हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संस्थाको हित हेर्नुपर्छ। संस्थाको हित हेर्दा त मलाई जन्माइयो नि! मलाई हटाउनु भनेको मार्नु सरह हो। तर हटाउँदा मलाई न्याय दिनुपर्छ।
मैले ३३ वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेँ। उमेर अनुसार अवकाशका लागि अब दुई वर्ष बाँकी छ। मेरा लागि यो भूमिकाभन्दा अर्को राम्रो छ जस्तो लाग्दैन। मैले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सोचेको कुरा गर्ने ठाउँमा आएको छु। छाडेर कहाँ जानु?
मलाई अझै म रहँदा देशलाई र सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वस्त तुल्याउन सक्छु भन्ने लागेको छ। र मलाई पनि देशका लागि मैले यो मौका छाड्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ। यदि मौका सरकारले दिएन भने मैले चित्त बुझाउन सक्छु कि कोशिस गरेको हुँ। तर गर्दा गर्दै पनि भएन भनेर पश्चाताप गर्नु पर्दैन।
भारत नेपाल इन्टरकनेक्सन मास्टरप्लान जसमा चार सय केभीको प्रशारण लाइन जोड्ने थियो, त्यो थन्केर बसेकोलाई 'टेकअफ' गरेर भारत गएर आफैं भिडेर त्यो मास्टरप्लान अनुसार ट्रान्समिसन लाइन बनाउने मेरो सोच छ। उच्च भागमा भण्डारण योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। दूधकोसी र उत्तरगंगा लगायत अगाडि बढाउनुपर्छ। प्राधिकरणले नेतृत्व गरेर भए पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो।
हामीले नेपालमा हाइड्रोपावर ट्रान्समिसन लाइनमा काम गरेपछि भारत, भुटान र बर्मामा सिकाउनुपर्छ।
विदेश छाडेर नेपाल बसेको छु। धेरै प्रलोभन हुँदा पनि नेपाल बसेर काम गरेँ। नमरुञ्जेल नेपाल बसेर काम गर्छु।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८, ०९:२४:००